Saturday March 09, 2019 - 19:53:56 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu horraysay muddo sanada ah mid kadib kamida maamullada kajira wadanka ciraaq ayaa sharci ka dhigay in maandooriyaha khamriga ee xaaraamta ah si caadi ah loogu iibin karo suuqyada ganacsiga.
Wararka ka imaanaya gobolka al-Anbaar ayaa sheegaya in dukaamo lagu iibiyo Khamrada laga furay magaalada Hiit halkaas oo uu kajiro maamul taabacsan xukuumadda shiicada e fadhigeedu yahay magaalada Baqdaad.
Dukaamadan oo uu ay ku hareer yaallaan bakhaarro lagu keydiyo dhammaan nuucyada khamriga waxaa ilaala ka haya ciidamada Booliska iyo kuwa Ashahaadda ladirirka ee qaabilsan waxa loogu yeero ladagaallanka argagaxisada.
Sida ay baahisay warbaahinta maxalliga ah dukaamadan waxa xarigga laga jaray dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay waqti hadda laga joogo 11 maalmood waxaana durbadiiba halkaas utumasho tagay faasiqiin kasoo jeeda gobolka al-anbaar iyo saraakiisha xukuumadda.
Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ay ciidamo dheeri ah ku gedaameen goobta ay kuyaallaan dukaamada qamriga si ay u ilaaliyaan dadka ka shaqeynayay iyo kuwa cabaya qamriga.
Dadka deegaanka ayaa cabasho ugudbiyay qaar kamid ah xildhibaannada kasoo jeeda magaalada Hiit balse waxaa layaab laheyd in xildhibaan calmaani ah uu sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin tallaabada ka jirta gobolka al-anbaar isagoo in qamriga lagu iibiyo tukaamada ku tilmaamay horumar.
Xildhibaan lagu magacaabo Faa'iq Sheekh Cali ayaa isagoo ka hor hadalayay xildhibaannada Federaaliga ah ee magaalada Baqdaad wuxuu aad udifaacay qamriga uu sharci ka dhigay golaha deegaanka magaalada Hiit isagoo ku sheegayay mid looga hor tagayo xagjirnimada sida uu hadalka udhigay.
Waxaa wax aad loola yaaba ah in dal muslim ah o dadkiisuna taariikh weyn ku leeyihiin caalamka islaamka sidaan loo ihaanaysto oo qamrigii shareecada islaamka xaaraantinimeysay dharaar cad dukaamada lagu iibinayo arrimahaas oo idil waxay yimideen kadib markii ay muslimiintu ka gaabiyeen fariidada jihaadka oo ay ladagaallami waayeen isbaheysiga saliibiga ah.
Shacabka Muslimka Ciraaq ayaa wajahaya dulli dhan walba ah waxaana magaalooyinka waaweyn lagusoo daadiyay ciidamo ashahaadda ladirir ah kuwaas oo taageera ka helaya dowlaha Iiraan iyo Mareykanka mana muuqdaan iska caabin adag oo ay ciidamadaasi cadowga ah lakulmayaan.